किन हुन्छ रक्सी धेरै पिएपछि ‘ह्याङओभर’, कसरी जोगिने ? – " कञ्चनजंगा News "
No Comments on किन हुन्छ रक्सी धेरै पिएपछि ‘ह्याङओभर’, कसरी जोगिने ?
एजेन्सी । चाडबाडको समयमा र——क्सी पिउने कतिपय मानिसको बानी हुन्छ । विशेषगरी चाडबाडमा पार्टीहरू अझै धेरै चल्नेगर्दछन् । र—-क्सी—-का गिलासहरू एक अर्कासँग ठो—क्का—उ—-दै थाेरै भन्दा भन्दै पनि अलि धेरै नै पिउन थाल्दछन्, जसले ‘ह्याङओभर’ बनाउन थाल्दछ । रातिकाे पार्टी सकिएपछि टाउको भारी हुन थाल्छ, बा—-न्ता र रिँ—-ग—टा लाग्न थाल्छ, थकाइ महसुस हुन थाल्दछ । मानिसहरू यसलाई धेरै पि—-ए—प—छि भएको ‘ह्या—ङओ—-भर’ हो भन्छन्। मानिसहरुले हिलसा माछाको अचार खानु, अण्डा खानु वा ओएस्टर खानु, ‘ह्याङओभर’ हट्छ समेत भन्ने गरेका छन् ।
अधिक र—–क्सी पिएपछि प्रायः मानिसहरू ह्याङओभर भएको बताउँछन्। फेरि जो साथीले अघिल्लो दिन धेरै पिउन बल गरेको थियो उसैले भोलिपल्ट ह्याङओभर हटाउने उपायहरू पनि बताइरहेको हुन्छ। ह्याङओभरबाट कसरी छुटकारा पाउने भन्ने समस्या आजको मात्र होइन। इजिप्टमा भेटिएको १९०० वर्ष पुरानो एउटा भोजपत्रमा यसबाट मुक्ति पाउने उपाय लेखिएको थियो।
अर्थात् उसबेला पनि मानिसहरू र——क्सी धेरै पिएपछि त्यसले निम्तिने समस्याबाट हैरान थिए र त्यसको समाधान खोजिरहेका थिए। त्यो भोजपत्रमा जुन उपायहरू सुझाइएको थियो, त्यो आजको दिनमा व्यवहारमा लागु गर्न कठिन छ।
तर आज पनि ह्याङओभर हटाउने अनेकौँ उपायहरू बताइन्छ। जस्तै क्यानरी भनिने चराको भुटेको मासु खानु, काँचो अण्डा खानु, गोलभेँडाको रस पिउनु, सस वा त्यस्तै चिज मिलाएर तयार पारिएको ओइस्टर खाँदा ह्या–ङ—ओभ–र हट्ने बताइएको छ ।
विज्ञानले के भन्छ भने जब अधिक र—–क्सी पिएर हामीलाई ह्या—ङ–ओ—भ—र भएको अनुभव हुन्छ या भनौँ जब टाउको भारी भएर दुख्न थाल्छ, रिँ—ग—–टा लाग्छ तबसम्म हाम्रो शरीरमा रक्सीको अंश बाँकी नै हुँदैन।
यी मध्यै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण एसिटेल्डिहाइड हो। यसलाई थप टुक्रा गरेर इन्जाइमले अर्को रसायन एसिटेटमा परिणत गरिदिन्छ। यही एसिटेट रसायन फ्याटीएसिड र पानीमा परिणत हुन्छ। केही वैज्ञानिकहरू ह्या—ङ—ओ—भ-र यही एसिटेल्डिहाइडका कारण भएको विश्वास गर्छन्। तर केही अध्ययनहरूले यो रसायनको ह्याङओभरसँग प्रस्ट सम्बन्ध नहुने देखाएको छ।
केही जानकारहरू भने रक्सीमा मिसाइने अरू नै रसायनका कारण ह्याङओभर हुने बताउँछन्। तिनलाई कन्जेनर्स भनिन्छ। ह्विस्की बनाउँदा अन्य धेरै किसिमका तत्त्व पनि निस्किन्छन्। धेरै पिएपछि मात्र मानिसहरूले तिनको उपस्थिति अनुभव गर्छन्। कडा रङ्गका रक्सीमा यसको मात्रा बढी हुन्छ। त्यसैले बर्बन पिउँदा उत्तिकै भोड्का पिएभन्दा बढी ह्या—ङ—ओ—भर—को अनुभूति हुन्छ। तर यसको असर व्य—-क्तिपिच्छे फरकफरक हुन्छ।
कसैले केरा खाए राहत हुन्छ भन्छन्। किनकि र—-क्सी पिउ—नाले श—रीर—मा भएको पोटासियम नष्ट हुन्छ र केरा खाए त्यसमा भएको पोटासियमले शरीरमा त्यसको कमी पूरा हुन्छ। तर पोटासियमको कमी एक रात रक्सी खाँदैमा हुँदैन, जुन केरा खाएर तुरुन्तै पूर्ति होस्।
कोही मानिसहरू ह्या—ङ—ओ—भ—-र हटाउन बिहान चिल्लोयुक्त नास्ता खानु पर्ने सुझाउँछन्। कोही भने पिउनु पहिल्यै पेटभरि खानु पर्ने बताउँछन्। केही मानिसहरू अण्डा खाने सल्लाह दिन्छन्। अण्डामा हुने एमिनो एसिड भनिने रसायन एसिटेल्डिहाइड टुक्र्याउन प्रयोग हुन्छ। त्यसैले अण्डा खाएर राहत मिल्छ भनिन्छ। तर त्यस्तो तत्त्व त अन्य खानामा पनि पाइन्छ। अहिलेको लागि भने र—–क्सी धेरै पिएर हुने स—म—स्या—बाट छुटकारा पाउने सबैभन्दा राम्रो उपाय भनेको आराम गर्नु, धेरै पानी पिउनु र एक चक्की एस्पिरिन लिनु हो।
← अब फेसबुक ग्रुपबाट पनि पैसा कमाउन सकिने, यसरी गर्न सकिन्छ मोनिटाइज → छोरीको काठमाडौं मृत्यु पछि, धादिङ्गमा बुवा आमाको पनि यस्तो दुखदायी मृत्यु